အရေဖျားလှီးခြင်းမရှိအသုံးပြုမှုဖြစ်ပ | Apg29
ဤသည်တနင်္ဂနွေ, ကသူတို့ယောက်ျားလေးများ၏အရေဖျားလှီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအဘို့ပြုသည်မဟုတ်ပိတ်ပင်ရန်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သော Center ကပါတီအစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဂလာတိ 6:15 ။ ယေရှုခရစ်၌ရှိသောအဘို့မဟုတ်အရေဖျားလှီးမဟုတ်သလိုယောက်ျားအားအဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှု, ဒါပေမယ့်အသစ်တခုဖန်တီးရေး။
အဆိုပါစင်တာမှသူတို့ယောက်ျားလေးများ၏အရေဖျားလှီးတားမြစ်ချင်ကြောင်း, မိမိပါတီညီလာခံအပေါ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပါတီဂျူးဘာသာနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုပိတ်ပင်ရန်လိုလားအဖြစ်ကရိပ်မိပါလိမ့်မည်ကြောင်းသတိပေးသည်။
ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနှင့်အညီ, ဒါကြောင့်အရေဖျားလှီးခြင်းမရှိအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ မကယ်မနိုင်ပါ။ ကယ်တင်နိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာယရှေုခရဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဒီလိုခငျြဘူး, နှင့် Center ကပါတီခေါင်းဆောင် Annie Lööfသူမဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောင်တကြောင်းနောက်မှဟုပြောသည်။
အခုတော့မေးခွန်းကိုလည်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတွေ့ဆုံထားပြီးဖြစ်သောအလယ်အလတ်ပါတီ၌လာသည်။ ဒါဟာSörmlandထံမှအန်နာ AF Sillen နှင့်မာရီယာ Gilstig ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအဘို့ဖြစ်၏မဟုတ်လျှင်အထီးအရေဖျားလှီးတားမြစ်ရန်အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဂျူးနှင့်မွတ်စလင်အုပ်စုများငါနားလညျနိုငျသောကမောက်ကမ, ဒါပေမယ့်သမ္မာကျမ်းစာအဆိုအရအရေဖျားလှီးချွေတာပေမယ့်သင်တို့ကိုခရစ်တော်အားအသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းများမှာသို့မဟုတ်မအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
1Co 7:19 ။ အရေဖျားလှီးဘာမျှမကိုဆိုလိုသည်, ထိုယောက်ျားအားဘာမှမဆိုလိုပေမယ့်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့။
ဂလာတိ 5:6ခရစ်တော်ယေရှုအရေဖျားလှီးမဟုတ်သလိုယောက်ျားဘာမှမအတွက်အဘို့, ယုံကြည်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်။
ဂလာတိ 5:11 ။ ငါနေဆဲအရေဖျားလှီးခြင်းတရားကိုဟောပြောလျှင်ငါသည်လည်းညီအစ်ကိုတို့, အဘယ်ကြောင့်ငါနေဆဲ persecution ခံရ? ထိုအခါကဝေးလက်ဝါးကပ်တိုင် offense လိမ့်မယ်။
ဂလာတိ 6:12 ။ လူဇာတိအားဖြင့်ကောင်းတစ်ဦးအသွင်အပြင်ရှိသည်ဖို့ချင်သောသူအပေါင်းတို့, သူတို့ကသူတို့သည်ခရစ်တော်၏ ထောက်. ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အဘို့ကိုညှဉျးဆဲမညျမဟုတျပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေဖျားလှီးခြင်းကိုရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်။
ကောလောသဲ 2:11 ။ သူ့ကို၌သင်တို့လည်းဇာတိပကတိအားဖြင့်အပြစ်တရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချွတ်ချပြီးထို့နောက်တို့လက်ဖြင့်လုပ်သောမဟုတ်အရေဖျားလှီးနှင့်အတူအရေဖျားလှီး, ဒါပေမယ့်ခရစ်တော်ရဲ့အရေဖျားလှီးနှင့်အတူခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့်အရေဖျားလှီးယုံကြည်သူများစည်းကြပ်ရန်လိုသူကျမ်းစာထဲမှာလူဦးရှိခဲ့သည်။ သူတို့မဟုတ်ရင်အားသိမ်းဆည်းမရပါကြောင်းပြောဆိုထားသည်သည်။ သငျသညျတမန်တော် 15 ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် 1-2:
1. ထိုအခါအချို့အမျိုးသားတွေကဆင်းယုဒပြည်မှ လာ. , ညီအစျကိုဆုံးမသွန်သင်: သင်မောရှေ၏ထုံးစံအတိုငျးအရေဖျားလှီး, သင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမသွားပါစေဘူးဆိုရင်။
2. ထိုအခါသဘောမတူရှိသညျထ, ပေါလုနှင့်ဗာနဗတို့သည်သူတို့နှင့်အတူအလေးနက်အငြင်းပွားမှုသို့ရတယ်။ သူတို့ကပေါလုနှင့်ဗာနဗနှင့်ထိုသူအချို့တို့သည်အခြားသူများကိုဒီအငြင်းပွားဖွယ်ပြဿနာအကြောင်းကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်အကွီးအကဲမြားအထိသွားလာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကပြောပါတယ်ကြောင်းသတိထားမိ "မောရှေ၏ထုံးစံ" မဟုတ်ဘဲ " ... မောရှေ၏တရား" တမန်တော်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့အတူတကွသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်, ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်:
15: 28-29 ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်များနှင့်ကျနော်တို့အဘို့ဤမှတစ်ပါးအဘယ်သူမျှမ သာ. ကြီးမြတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလိုအပ်သင်တို့အပေါ်၌ တင်. ဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ:
သငျသညျရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်ဘာ, အသွေးကိုမှ၎င်း, လည်ပင်းညှစ်တိရစ္ဆာန်များ၏အသားနှင့်မတရားသောမေထုန်ကိုကြဉ်ရှောင်ဒါက 29. ။ သငျသညျဂရုတစိုက်ဒီဘို့သင့်ကိုတိုင်ပင်လျှင်, သင်ပိုင်ခွင့်လုပ်နေတာ။ နှုတ်ဆက်။
ဒါပေမယ့်ဆွီဒင်အတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံဒါအန္တရာယ်ကင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့အစစ်အမှန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အရေးပါအရာတို့ကိုဆန့်ကျင်သွားရလာမယ့်အချိန်, ထိုကဲ့သို့သင်တို့ယေရှုကိုမယုံကြည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကလေးများသညျယရှေုကိုယုံကြည်ဖို့သင်ပေးလို့မရပါဘူးကြောင်း, ထို့နောက်တကယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုဆွီဒင်နှင့်၎င်း၏လူတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာကြပါစို့။ သူတို့သညျယရှေုနှင့်သမ္မာကျမ်းစာဆန့်ကျင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံရေးသမားများအဘို့ဆုတောင်းစေ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခငျသညျသကျသခေံအဖြစ်သူ၏စပါးရိတ်ရာကာလသို့လုပ်သားတို့ကိုလွှတ်ခြင်းနှင့်လူဦးတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေကြသည်ဒါကြောင့်သူ့ကိုခံယူနိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ယေရှုအကြောင်းဧဝံဂေလိပါလိမ့်မယ်ငါဆုတောင်းကြပါစို့။
V 04, onsdag 27 januari 2021 kl 17:58